Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo gudaha u galay magaalada Jowhar
Wararka ka imanaya xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay si buuxda ula wareegay magaaladaasi .
Warkan ayaa waxa warbaahinta u xaqeejiyey abaanduulaha ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Gen. Cabdikariim Yuusuf Aadan (Dhaga-badan), asagoo intaana raaciyey in ciidamadu ay haatan gudaha magaalada ka wadaan baritaanno.
La wareegidda ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa timid kaddib markii ay magaalada isaga baxeen xoogaggii Al-Shabaab ee muddada saddaxda sano ay gacanta ku haayey maamulka magaalada iyo guud ahaan inta badan degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe.
Xoogaggii Al-Shabaab ee magaalada ka baxay ayaa lagu soo warramayaa in ay u baqooleen dhanka dhulka miyiga ah, waxaana socda dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay saldhigyo uga sameysanayaan gudaha iyo hareeraha magaalada.
Qabsashada ciidamada dowladda ay qabsadeen magaalada Jowhar ayaa waxa ay dhabarjab weyn ku tahay xarakadda Al-Shabaab oo halkaasi ku weysay magaalo muhiim ah, isla markaana xarun u ah gobol weyn oo istaraatiiji ah.